जान्नुहोस् आजको तपाईको आर्थिक राशिफल कस्तो छ ?
गृहपृष्ठ » आजको राशिफल » ज्योतिष » जान्नुहोस् आजको तपाईको आर्थिक राशिफल कस्तो छ ?
बुधबार १६ असार, २०७८
जनबोली ज्योतिष ब्यूरो । वित्तीय पक्ष बाट, आज धेरै राशिफल को लागि धेरै शुभ हुन गइरहेको छ।
यद्यपि केही राशि चिन्हहरूलाई व्यवसाय, लगानी र पैसा लेनदेनको सन्दर्भमा सावधान रहन सल्लाह दिइन्छ।
हामी तपाईलाई सबै राशि चिन्हहरूको स्थिति थाहा दिदैछौँ ।
२०७८ असार १६ गते, बुधवार, ३० जुन २०२१। आषाढ कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि (१६ः५८ बजेदेखि सप्तमी)। पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र। चन्द्रराशि– कुम्भ।
मेष – ARIES चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ : आजको दिन आर्थिक मजबुतको लागि समय हो। नाफा राम्रो गर्न जारी रहनेछ। कार्य विस्तार योजनाहरूले गति लिनेछ। व्यापार विस्तारमा ध्यान दिनेछ। महत्त्वपूर्ण मामिलामा छिटो कार्य गर्नुहोस्।
वृष – TAURUS इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो : आजको दिनको समय ठूलो प्रयासहरूलाई प्रोत्साहन दिने दिन हो। व्यापार मा शुभ समाचार आउँनेछ । महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकिन्छ । जिम्मेवारी बढाउन सकिन्छ। व्यवस्थापनको काममा गति देखाउनुहोस्।
मिथुन – GEMINI का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह : पूर्व प्रयासले सकारात्मक नतिजा ल्याउनेछ। भाग्य को शक्ति बढ्नेछ। एक लक्ष्यका साथ काम गर्दा फल अवश्य आउनेछ । यात्रा सम्भव छ। महत्त्वपूर्ण मामिलामा गति देखाउनुहोस्। सम्पर्क सुधार हुनेछ।
कर्कट – CANCER हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो : अचानक खर्च बढ्ने सम्भावना रहन्छ। नियमलाई वेवास्ता गर्नुहोस्। व्यापार सामान्य हुनेछ। मौखिक मोलतोलमा नपर्नुहोस्। स्मार्ट काममा जोड दिनुहोस्। निकटहरुले सहयोग दिनेछन् ।
सिंह – LEO मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे : टीमभित्र भावनाले शक्ति प्राप्त गर्दछ। क्षमता अनुसार जिम्मेवारी लिने योग छ । वरिष्ठहरुको सहयोग रहने छ। कार्य व्यवसाय मामिलामा ध्यान केन्द्रित राख्नुहोस्। साझा प्रयासहरूले फल दिनेछ। नाफा राम्रो हुनेछ।
कन्या – VIRGO टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो : खर्चमा एक चेक राख्नुहोस्। विरोधबाट सावधान रहनुहोस्। व्यावसायिकतामा जोड दिन जरुरी छ । तपाइँको लेनदेन मा स्पष्ट हुनुहोस्। भाग्यले महत्वपूर्ण कुरामा तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। परीक्षामा नपर्नुहोस्।
तुला – LIBRA र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते : सबै भन्दा राम्रो समय बनाउनुहोस्। सबैजना तपाईको प्रदर्शनबाट प्रभावित हुनेछन्। बौद्धिकता अगाडि हुनेछ। दीर्घकालीन योजनाहरूमा केन्द्रित हुनेछ। नाफा अपेक्षानुसार हुनेछ।
वृश्चिक – SCORPIO तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु : आवश्यक कार्यहरूको सूची बनाएर अघि बढ्नुहोस्। भवन र सवारीसाधनको मामिलामा गति हुने देखिन्छ। सुविधाहरुमा खर्च बढ्ने छ। लेनदेनमा हडबडाउनबाट बच्नुहोस्। ऋण लिनबाट जोगिनुहोस्।
धनु – SAGITTARIUS ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे : पूर्व र प्रशासनिक काम गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण जानकारी पाउन सकिन्छ। क्यारियर व्यवसायमा शुभता हुनेछ। कार्य व्यवसाय सम्बन्धित सूचना सम्पर्कले गति प्राप्त गर्दछ। कुलीनता राख्नेछ।
मकर – CAPRICORN भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि : लाभ र प्रभाव बढाउनको लागि यो दिन महत्वपूर्ण हो। संग्रह संरक्षणको साथमा बचतमा जोड दिइनेछ। सम्पत्ती सम्बन्धी मामिला पक्षमा रहनेछ। प्रतिस्पर्धामा राम्रो गर्नेछ। सबैको सहयोग प्राप्त हुनेछ।
कुम्भ – AQUARIUS गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द : अनुकूलताको प्रतिशत वृद्धिमा रहनेछ। साहस र सम्मान बढ्नेछ। सबैको सहयोग उत्साहित हुनेछ। कार्य व्यवसायले गति प्राप्त गर्दछ। नाफा अपेक्षानुसार हुनेछ।
मीन – PISCES दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि : सजिलैसँग अगाडि बढ्नको लागि यो दिन हो। राम्रो तालिका कायम राख्नुहोस्। विपक्षीले सक्रियता देखाउन सक्छ। खर्च नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनेछ। पहिलेका केसहरू देखा पर्न सक्छन्। देखाउनबाट बच्नुहोस्।
हर जो कोहीको ध्यान खिच्छन् यी ४ राशिका युवती, के तपाईपनि यो लिष्टमा त पर्नुहुन्न ?
भोलि रातिदेखि बुध ग्रह हुँदैछ वक्र, यी राशि हुनुहोस् सावधान !
जान्नुहोस् जेठ २ गते आईतबारदेखी जेठ ८ गते शनिबार सम्मको साप्ताहिक राशिफल
दुर्लभ योगका कारण आजदेखी यी ८ राशिमा यस्तो प्रभाव : राशिफल २०७७ बैशाख १९ गते आइतवार